Shiinaha Custom Qado meeldhexaadka ah Bac, Soo-saareyaasha, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Shandada Warshadaha Co., Ltd.
Guri > > Bac qadada > Boorsada qaboojiyaha qadada
Bacda kuleylka iyo kuleylka ayaa ah shaqada ugu aasaasiga ah, waa nooc ka mid ah boorsooyin gaar ah oo leh saameyn ilaalin kuleyl muddo-gaaban ah, waxay hayn kartaa qabow / kuleyl, lakabka dahaarka sheyga waa suuf luul + bireed aluminium ah, wuxuu ku siin karaa saameyn kuleylka kuleylka wanaagsan.
1. Bacda qafiska product introduction:
Noocyada xirmada dahaadhka:
(1) kuleyl iyo qabow
(3) Waa inuu leeyahay iska caabin saameyn sare leh, oo aan sahlaneyn in lagu jabiyo cadaadis culus ama saameyn, kama tagayo xoqitaan.
Tani waa tixgelinta koowaad marka aad dooranaysid xirmada dahaadhka In kasta oo noocyada kala duwan ee alaabtu ay kuxiran yihiin siyaabo kala duwan, dabooliddu waa xaalad lama huraan u ah ilaalinta joogtada ah ee cuntada xusuusta.
(5) Heerka caalamiga ah ee cabbirka cabbirka ayaa ah in la qiimeeyo baaritaanka qoyaanka. Qoyaanka suugaanta ee xirmada xirmooyinka tayo sare leh ayaa 200 jeer ka hooseeya tan alaabada la midka ah, waxayna ku sii hayn kartaa waxyaabaha cusub waqti dheer.
(6) Taxaddarrada suunka dahaarka:
1. Xiriir olol furan ama qalab goynta fiiqan waa mamnuuc.
2. Ka fogow soo-gaadhista muddada-dheer ee roobka, huurka iyo iftiinka qorraxda, taas oo saamayn ku yeelanaysa saamaynta kuleylka kuleylka.
2. Xaddidyada alaabada (qeexitaannada) bacda qaan-gaaska
Waxay noqon kartaa wax soosaarka OEM
Shaqada, safarka, ganacsiga iyo wakhtiga firaaqada
Maaddooyinka waa la beddeli karaa haddii loo baahdo
Boorsada laba-in-hal oo leh mid iyo laba garab
Dherer 30cmX 20cmX 43cm sare
Waxay kakoobantahay kiniin, taleefan, boorso, joornaalka A4, dallad, galaaska biyaha
Ikhtiyaar ikhtiyaari ah si loo daboolo baahiyaha shaqsiyeed
3. Waa maxay mabda'a bacda dahaadhku Maxay diirimaad ugu jirtaa in ka badan laba illaa saddex saacadood?
Bacda qadada waxaa ku jira qalab dahaadh ah. Kuleylka kuleylka ee sheygan waa mid hooseeya, kaas oo xiraya xiriirka hawada, sidaas darteed heerkulka gudaha bacda ayaa isku urursan, oo si toos ah looma kala firdhin karo, si loo kordhiyo waqtiga heerkulka lumay ee bacda, lana gaaro Si guud marka loo eego, kuleylka kuleylka ee qalabka bacda ningax waa liitaa, kuleylkuna waa gaabis yahay.
5. Xirxirida iyo rarida bacda qafiska
(2) Xajmiga cabbirka ee caadiga ah: 48cm X 34cm X 12cm, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka iyadoo loo eegayo baahiyahaaga, si loo badbaadiyo xamuulka adiga.
(3) faahfaahinta xirxirida: 50cm X 36m X 60cm.10PCS / box.Carton wax: K = K 5 lakab oo warqad jiingado qaro weyn leh.
(4) Qaabka gaadiidka: gaadiidka badda, cirka iyo dhulka.Waxaan dooran doonnaa qaabka ugu wanaagsan ee saadka ee gaadiidka.
(5) (Habka Gaadiidka).
(1) Iibinta shaybaarka kadib. Haddii nooca ugu horreeya u baahan yahay in wax laga beddelo, waxaan wax ka beddelaynaa shaybaarrada si waafaqsan faahfaahinta wax ka beddelka. Nidaamkani gebi ahaanba waa lacag la'aan.
(2) Waxaan kugula socodsiin doonaa horumarka wax soo saar ee alaabooyinka amarka waqtiga lagu jiro inta lagu gudajiro howsha wax soo saarka, si aad si dhaqso leh ku ogaan karto xaalada amarka.
(3) Waxaan xiriiri doonaa 24 saacadood maalintii.Waxaan si hufan ula xiriiri doonaa si loo hubiyo isgaarsiinta habsami ee macluumaadka.
(4) Si adag u xakamee tayada wax soo saarka oo kuugu soo dhiibo adiga oo leh qiime 100% u qalma.
(5) Waxaan sameyn doonaa wax kasta oo macquul ah si aan kuu keydinno kharashyada.
Q2: Mudo intee le'eg ayaa waqtiga hogaankaagu yahay?
J: Inta badan waxay qaadataa 3-5 maalmood, haddii la heli karo ama
S3: Ma bixisaa shaybaar ma bilaashbaa mise waa dheeri?
J: Haa, waxaan ku siin karnaa shaybaarro bilaash ah haddii tijaabooyinka ay yaalaan kaydka iyaga oo aan bixin xamuulka.
Q4: Maxay yihiin shuruudahaaga bixinta?
S5: Ma leedahay amarka ugu yar?
J: Haa, waxay kuxirantahay cabirka sheyga, hanaanka iyo habka wax soo saar.
S6: Waa maxay waqtiga hogaamintaadu?
Jawaab: (1) Waqtiga dirista Muunadda: Kadib helitaanka amarka muunadda, bixinta saamiga ayaa la xisaabin doonaa. Wareegga tijaabada wuxuu ku saabsan yahay 7 maalmood oo shaqo. Waqtiga gaadiidku wuu kala duwan yahay gobollo kala duwan, wareegga rasiidka muunaduna wuu ka duwan yahay.
(2) Wareegga gaarsiinta wax soo saarka jumlada: bilow waqtiga ka dib markaad hesho heshiiska iyo dhigaalka, wareegga waxsoosaarkuna waa ilaa 45 maalmood oo shaqo.
S7: Maxay yihiin adeegyada oraahda ee aad bixiso? Waa maxay muddada oraahdu? Waa maxay shuruudaha oraahda?
J: (1) Waxaan ku qiimeyn karnaa kuna soo qaadan karnaa iyadoo loo eegayo sawirada, sawirada naqshadeynta (sawirada CAD iyo 3D 3D) ee aad bixisay, waxaanan bixin karnaa qorshayaal xirfadeed iyo wax soo saar badan.
(2) Wareegga oraahda dufcadu waa 2-3 maalmood oo shaqo. Waxsoosaar kasta waxaa la soo xigtay 12 saacadood.
Calaamadaha kulul: Bacda qadada qadada, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka